ကျနော်တို့သက်ကြီးရွယ်အိုသို့နုပျိုသောအသွေးကိုချပြီးအားဖြင့်အိုမင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို reverse နိုင်သလား? - သတင်း Rule
ကျနော်တို့သက်ကြီးရွယ်အိုသို့နုပျိုသောအသွေးကိုချပြီးအားဖြင့်အိုမင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို reverse နိုင်သလား?
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ကျနော်တို့သက်ကြီးရွယ်အိုသို့နုပျိုသောအသွေးကိုချပြီးအားဖြင့်အိုမင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို reverse နိုင်သလား?” Ian ကနမူနာအားဖြင့်ရေးသားခဲ့, အင်္ဂါနေ့က 4th သြဂုတ်လအပေါ်အဆိုပါဂါးဒီးယန်းများအတွက် 2015 05.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
တစ်ခုသြဂုတ်လနံနက်တွင်အတွက် 2008, တိုနီ Wyss-Coray Palo Alto အတွက်စစ်ပြန်ရေးရာဆေးရုံမှာကွန်ဖရခန်း၌ထိုင်လျက်, ကယ်လီဖိုးနီးယား, မိမိအဓာတ်ခွဲခန်းရဲ့အပတ်စဉ်အစည်းအဝေးစတင်ဘို့စောင့်ဆိုင်းနေ. Wyss-Coray, စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်မှအာရုံကြောတစ်ဦးပါမောက္ခ, အိုမင်းခြင်းနှင့် neurodegeneration ကိုလေ့လာတဲ့သူသုတေသီတစ်ဦးနုပျိုအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့သည်. စည်းကမ်းအဖြစ်, အဆိုပါလူစုလူဝေးမေ့ပျောက်ရေးရာခဲ့ကြသည် - သိပ္ပံနည်းကျတိုးတက်မှု၏ incremental သဘောသဘာဝကြီးတွေအံ့သြဖွယ်များမှသူ့ဟာသူချေးပါဘူး. သို့သော်ထိုနေ့ရက်စကားပြောဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအစွန်းရောက်စီမံကိန်းကိုအပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်, သူဝေမျှဖို့အသစ်သောရလဒ်များကိုခဲ့.
ရှောလုသည် Villeda, slick အနက်ရောင်ဆံပင်နဲ့တစ်ဦး goatee နဲ့ ebullient ပါရဂူဘွဲ့ကျောင်းသား, အလယ်အသက်အရွယ်၏မှန်းဆဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံသတိရခေါ်သုတေသနအတွက်သုံးသောအတိတ်တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးခဲ့. သူကအဟောင်းနှင့်ပိုငျးအခွားကို၎င်းငျးငယ်ရွယ်ထံမှသောအသွေးတာဟာအားဖြင့် rejuvenated နိုင်ခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်. အဆိုပါယူဆချက်ကြောင့်အသံမယ်သကဲ့သို့စိတ်ပျက်ဖွယ်မဟုတ်ခဲ့.
Related: ကျနော်တို့သက်ကြီးရွယ်အိုသို့နုပျိုသောအသွေးကိုချပြီးအားဖြင့်အိုမင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို reverse နိုင်သလား? - podcasts
Villeda ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာများအတွက်သွေးထောက်ပံ့ရေးမျှဝေကြောင်းခွဲစိတ် conjoined ကြွက်အားလုံးနှင့်အတူရှေ့ပြေးလေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ခဲ့သည်. Young ကကြွက်အဟောင်းတွေကြွက်တွေကနေအသွေးအားလက်ခံရရှိ, အဟောင်းကြွက်အငယ်သူတွေကိုထံမှအသွေးအားလက်ခံရရှိ. Villeda သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်အပေါ်သက်ရောက်မှုကိုမြင်ချင်ခဲ့တယ်. အိုမင်းဦးနှောက်ထဲမှာအာရုံခံသူတို့၏ဆက်သွယ်မှုများကိုဆုံးရှုံးနဲ့ off သေဖို့ကိုစတင်ရန်; နောက်ဆုံးမှာ, ဦးနှောက်ကိုကျုံ့နှင့်ဒီထက်ထိရောက်ဖြစ်လာ. အဆိုပါ hippocampus ကိုခေါ်တစ်ဦးကဒေသ, မှတ်ဉာဏ်နှင့်သင်ယူမှုများအတွက်အလွန်အရေးပါ, အသက်အရွယ်နှင့်အတူဆိုးရွားဖို့ပထမဦးဆုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်, လူရဲ့မှတ်ဥာဏ်နဲ့စဉ်းစားဖြစ်စဉ်များစိတ်ပျက်စေ.
Villeda ရဲ့အလုပ်ကျွမ်းကျင်မှုကိုယူ. တစ်ဦးက mouse ကိုဦးနှောက်တစ်မြေပဲ၏အရွယ်အစားဖြစ်ပါသည်. စစ်ဆေးရေးဘို့တဖယ်ရှားပစ်ရန်ခက်ခဲသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့် Villeda ထို့နောက်ထူတစ် cryomicrotome သုံးပြီးမီလီမီတာ၏န့်ကို 1/25 သို့တစ်ခုချင်းစီကိုဦးနှောက်ဖြတ်ခဲ့, တစ်ဦး benchtop အသင့်စားဆိုင် slicer နဲ့တူအောင်နေတဲ့စက်. Villeda အကြောင်းကိုထံမှမျိုးစုံအစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခုယူ 40 ထို့နောက်ကြွက်နှင့်မွေးကင်းစအာရုံခံမှချည်နှောင်တဲ့ဆိုးဆေးသူတို့နှင့်အတူစွန်း. တစ်ဏုလက်အောက်တွင်ကလေးဦးနှောက်ဆဲလ်တွေနည်းနည်းညိုသစ်ပင်များနဲ့တူထွက်မတ်တပ်ရပ်.
အဆိုပါဓာတ်ခွဲခန်းအစည်းအဝေးတွင်ရှေ့တော်၌ထိုနေ့က, Villeda နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Kurt Lucin အလုပ်အတွက်အစောပိုင်းရောက်ရှိ. သေးငယ်တဲ့ paintbrush နှင့်အတူ, Villeda တစ်ခုချင်းစီကိုဦးနှောက်အချပ်သုတ်သင်, တခုပြီးတခု, တစ်ဏုဆလိုက်ပေါ်သို့, နှင့်အလွန်သေးငယ်သောအညိုရောင်သစ်ပင်ပုံစံမျိုးစုံရေတွက်. ဒါဟာနာရီကိုယူ: သူအကြောင်းကိုခဲ့ 200 စစ်ဆေးခြင်းမှအစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခု, အဟောင်းနှင့်ငယ်ရွယ်ကြွက်တွေကနေ. အပိုင်းတခုစီမှာမွေးကင်းစအာရုံခံတက် totting ပြီးနောက်, သူကတစ်ဦးစာရင်းဇယားအစီအစဉ်ကိုသို့အရေအတွက်ကိုပုတ်. သူ 10pm ပြီးနောက်ပြီးဆုံး.
နောက်ကျခဲ့သော်လည်း, Villeda Lucin နံပါတ်များအကြပ်အတည်းမှသူနှင့်အတူနေထိုင်လုပ်. "ဒါဟာထိုကဲ့သို့သောရှည်လျားသောစမ်းသပ်မှုခဲ့. ငါထင်, ဒါကြောင့်အလုပ်မလုပ်ပါဘူးလျှင်, သူကဒီမှာဖွင့်. ကျနော်တို့ကသောက်သွားနှင့်ဖမ်းပြီးနိုင်ပါတယ်,"Villeda မကြာသေးမီကပြောတယ်. သူက "ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ" မှတ်သားမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိခလုတ်တစ်ခုနှိပ်လိုက်. အဆိုပါစာရင်းဇယားအစီအစဉ်ကိုလူအပေါင်းတို့သည်ဒေတာကို ယူ. ကြွက်အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီ၏ဦးနှောက်အတွက်မွေးကင်းစအာရုံခံ၏ပျမ်းမျှအရေအတွက်ကတွက်ချက်. တစ်ဦးကတခဏအကြာမှာ, ဘားဇယားမျက်နှာပြင်ပေါ်ပေါ်လာ.
Villeda ထိုညဉ့်သုံးနာရီ '' အိပ်စက်ခြင်းတယ်. နောက်တစ်နေ့နံနက်, သူသည်ဓာတ်ခွဲခန်းအစည်းအဝေးတွင်တက်မတ်တပ်ရပ်နှင့်လူငယ်အသွေးအိုမင်းဦးနှောက်မှဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာသူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မှထုတ်ဖော်ပြသ. "အခန်းထဲမှာတစ်အဖွဲ့ဝင်များကိုလျှပ်စစ်မီးရှိခဲ့သည်,"Wyss-Coray ပြန်ပြောပြ. "ကျွန်မပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ရုပ်တုဆင်းတုကိုမြင်လျှင်နှင့်ဟုမှတ်မိနေ, '' Wow ။ ' "ငယ်ရွယ်အသွေးအားလက်ခံရရှိကြောင်းဟောငျးကြွက်တွေဟာ hippocampus အတွက်ဦးနှောက်ဆဲလ်ကြီးထွားတဲ့ပေါကျကှဲကြုံတွေ့. သူတို့ကသူတို့ရဲ့ counterparts တွေကိုအဖြစ်အများအပြားမွေးကင်းစအာရုံခံအဖြစ်သုံးမှလေးကြိမ်ရှိခဲ့. သို့သော်ရှိသမျှသောမဟုတ်ခဲ့: အဟောင်းအသှေးကိုနုပျိုကြွက်၏ဦးနှောက်အပေါ်ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့, neuron အသစ်တွေ၏မွေးဖွားတုံ့ဆိုင်းနှင့်၎င်းတို့၏အချိန်မရောက်မှီအဟောင်းများကိုရှာဖွေနေသူတို့ကိုထွက်ခွာ.
ငယ်ရွယ်အသှေးကိုလက်ခံရရှိကြောင်းဟောငျးကြွက်တွေဟာ hippocampus အတွက်ဦးနှောက်ဆဲလ်ကြီးထွားတဲ့ပေါကျကှဲကြုံတွေ့
အခန်းထဲမှာအခြားသိပ္ပံပညာရှင်များအံ့အားခဲ့ကြသည်. တချို့ကသံသယဖြစ်ကြသည်. ဒါဟာအစစ်အမှန်ဖြစ်နိုင်? "ဒါကကြီးမားတဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်,"Wyss-Coray ကပြောပါတယ်. "အဟောင်း mouse ကိုသင်ကနုပျိုသောအသွေးကိုပေးသည့်အခါပိုပြီးအာရုံခံစေရန်စတင်သည်ခဲ့လျှင်? ဒါကအံ့သြဖွယ်ဖြစ်၏။ "
ခုနစ်နှစ်အကြာကြောင်းအစည်းအဝေးပြီးကတည်းက, ဒီခေါင်းစဉ်အပေါ်သုတေသနပြုသိသိသာသာပေါ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်. ဒါဟာငယ်ရွယ်သွေးထဲမှာအသက်ကြီး၏တွေပေါ်မှာတစ်ခုဖယျရှားဖို့အိပ်ရအံ့သောငှါမှနျးအချို့ဦးဆောင်ထားပါတယ်. သို့သော်ငယ်ရွယ်အသွေးသိသာ rejuvenation ဂုဏ်သတ္တိများကျန်းမာသံသယနဲ့ကုသရမည်ဖြစ်သည်. သူတို့မြှင့်အဆိုပါမျှော်လင့်ချက်များ mouse ကိုလေ့လာမှုများအပေါ်တစ်ခုတည်းကိုသာငြိမ်ဝပ်စွာနေ. အဘယ်သူမျှမအကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုအစဉ်အဆက်လူမှာသက်သေပြခဲ့ကြ. တဖန်, အဘယ်သူမျှမအစဉ်အဆက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါသည်.
ဒါကပြောင်းဖို့အကြောင်း. အောက်တိုဘာလအတွက် 2014, Wyss-Coray ငယ်ရွယ်အသွေးတော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးလူ့ရုံးတင်စစ်ဆေးစတင်. ဆေးပညာ၏စတန်းဖို့ဒ် School မှာ, လူငယ်များအနေဖြင့်အသှေးကိုပလာစမာ၏တာဟာနှင့်အတူသက်ကြီးရွယ်အိုအားပေးပြီးမှလျက်ရှိသည် အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ. အဆိုပါရလဒ်များနှစ်ကုန်မှာမျှော်လင့်ရသည်. ဒါဟာငယ်ရွယ်အသွေးဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလားအလာများအတွက်သေးအကြီးမြတ်ဆုံးစမ်းသပ်မှုဖြစ်ပါသည်.
သမိုင်းတာများအတွက်, ဆည်းကပ်ကလူ မသေခြင်းအောင်မြင်ရန်အိုမင်းရပ်တန့်ရန် - သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးနှစ်ပေါင်းရာချီများအတွက်အသက်ရှင်ရန်. ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ, သိပ္ပံပညာရှင်များကိုပိုမိုကျိုးနွံရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်ဖို့လေ့. ချမ်းသာကြွယ်ဝလူအမျိုးမျိုးအတွက်, အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဆေးဝါးတိုးတက်လာအတိတ်ရာစုနှစ်သက်တမ်းအထိမောင်းနှင်ကြပါပြီ. ယခု မှစ. ငါးနှစ်အတွင်း, လူ့သမိုင်းမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်, အဟောင်းကိုငါးနှစ်အောက်ကလေးများထက် Over-60 ထက်ပိုရှိလိမ့်မည်. တွင် 2050, နှစ်ဘီလီယံလူဖြစ်ကြလိမ့်မည် 60 သို့မဟုတ်အထက်, နီးပါးနှစ်ဆအရေအတွက်ကယနေ့.
ကြောင်းစာရင်းဇယားနောက်ကွယ်တွင်ကြီးမားသောပြဿနာတရပ်တည်ရှိသည်. ပြည်သူ့ကြာကြာနေထိုင်နေကြ, ဒါပေမဲ့သူတို့သေချာပေါက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်အသက်ရှင်ကြသည်မဟုတ်. နာတာရှည်အခြေအနေများနှင့်အတူအဟောင်းရုန်းကန်, မကြာခဏအများအပြားတစ်ကြိမ်မှာ: ကင်ဆာ, အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ, နှလုံးရောဂါ, ဆီးချိုရောဂါ, အကွောရောငျနာ, အရိုးပွရောဂါ, နှောက်.
ငယ်ရွယ်အသွေးသက်ရောက်မှု၏ပထမဦးဆုံးလူ့ရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်, စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်မှ, လူငယ်များအနေဖြင့်အသှေးကိုပလာစမာ၏တာဟာအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုပေးထားလျက်ရှိသည်. ဓါတ်ပုံ: Ralf Hirschberger / DPA / Corbis
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနပညာရှင်များကသီးခြားစီဤရောဂါများကိုင်တွယ်လေ့. နောက်ဆုံးတော့, အဆိုပါရောဂါကွဲပြားကြသည်: ကင်ဆာ mutated DNA ကိုပေါ်ထွန်း; ထပိတျဆို့နတေဲ့သွေးကြောကနေနှလုံးရောဂါ; ပျက်စီးသွားသောဦးနှောက်ဆဲလ်တွေကနေစိတ်ဖောက်ပြန်. အဆိုပါရောဂါဗေဒများကိုအထောက်အကူပြုသောဇီဝဖြစ်စဉ်များအလွန်တရာကွဲပြား. တစ်ခုချင်းစီကို, ထိုအခါ, ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကုသမှုလိုအပ်ပါတယ်. သို့သျောလညျးအခြို့သောသုတေသီများသည်အခြားရှုထောယူ: အသက်ကြီးရောဂါ၏အကြီးမားဆုံးသောကားမောင်းသူအသက်ကြီးသူ့ဟာသူဖြစ်ပါသည်. ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်အိုမင်းမှုအတွက်ကုသတီထွင်မဟုတ်?
အဆိုပါအယူအဆအပေါ်ဖမ်းမိထားပါတယ်, ဝေးပင်မစီးကြောင်းမှနေဆဲဖြစ်ပါတယ်သော်လည်း. Google ရဲ့လျှို့ဝှက် Calico စစ်ဆင်ရေး, ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 2013, ချပြီးဖြစ်ပါတယ် Anti-အိုမင်းသုတေသနသို့ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာရာပေါင်းများစွာ. Craig Venter, အဆိုပါမျိုးရိုးဗီဇစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်, ရှည်သောအသက်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသောမျိုးဗီဇကိုရှာဖွေလူ့အသက်ရှည်လို့ချေါတဲ့ကုမ္ပဏီတွေစတင်ပေးခဲ့ပါတယ်. ဤအတောအတွင်း, သိပ္ပံပညာရှင်များလူသိများတဲ့မူးယစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုတွေအတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက်အမေရိကန်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြ, ထိုကဲ့သို့သောဆီးချိုရောဂါကုသမှုအဖြစ်, Metformin ဆေးဟာလည်း, Anti-အိုမင်းသက်ရောက်မှုဖုံးကွယ်၏မြော်လင့်ခြင်းအတွက်.
ပြည်သူ့ကြာကြာနေထိုင်နေကြ, ဒါပေမဲ့သူတို့သေချာပေါက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်အသက်ရှင်ကြသည်မဟုတ်. နာတာရှည်အခြေအနေများနှင့်အတူအဟောင်းရုန်းကန်
သိပ္ပံပညာရှင်များသည်လုံးဝလုပ်ငန်းစဉ်ရပ်တန့်ဘယ်တော့မှစေခြင်းငှါ: အိုမင်းမော်လီကျူးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဒီလိုပါပဲနှင့်ရှုပ်ထွေးသောစပ်လျဉ်းဖြစ်ပါသည်. ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဆိုးဆုံးနာတာရှည်ရောဂါများအထောက်အကူပြုကြောင်းအပြောင်းအလဲများရပ်တန့်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူစေခြင်းငှါ,. သူတို့ဟာ healthspan တိုးချဲ့ချင်, သက်တမ်းမရ. အဆိုပါလောင်းကြေးကြီးမားများမှာ. လာမယ့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်း, တစ်ဦးတည်းဗြိတိန်မှာစိတ်ဖောက်ပြန်စောင့်ရှောက်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်£ 24bn မှထမြောက်ကြလိမ့်မည်, တစ်ဦး 60% ကုန်ကျစရိတ်အပေါ်တိုးမြှင့်အတွက် 2007. ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က, ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ခေါ်တော် ကြောင့်မီးခိုးရောင်လူဦးရေမှနာတာရှည်နာမကျန်းအတွက်မြင့်တက်အဓိကပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစိန်ခေါ်မှု.
Wyss-Coray အိုမင်း၏ပြဿနာအဖြေကိုလူ့သွေးထဲမှာအိပ်ရလိမ့်မယ်ရှိမရှိစဉ်းစားမိဖို့ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမဟုတ်ပါ. သက်ကြီးရွယ်အိုနုပျိုဖို့သွေးသွင်းအဆိုပြုဖို့ပထမဦးဆုံးဆေးသမားတစ်ခုမှာခဲ့သည် Andreas Libavius, ဂျာမန်ဆရာဝန်နှင့် alchemist. တွင် 1615 သူကလူငယ်တစ်ဦးယောက်ျား၏သူတို့အားအဟောင်းယောက်ျား၏သွေးလွှတ်ကြောကိုဆက်သွယ်အဆိုပြု. သူကလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဘို့အမြင့်မားသောမျှော်လင့်ခဲ့တယ်. ဒါကြောင့်လူငယ်တစ်ဦးစမ်းရေတွင်းထဲကနေခဲ့ကြပါလျှင်အဖြစ် "ထိုလုလင်၏ပူပြင်းခြင်းနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာအသွေးတော်ဟောင်းတဦးတည်းထဲသို့သွန်းလောင်းမည်, နှင့်သူ၏အားနည်းချက်အပေါငျးတို့သပပြောကျသှားပါလိမ့်မည်,"ဟုသူကအခိုင်အမာ, Sally Rudmann အားဖြင့် Bloodbanking နှင့်သွေးသွင်းဆေးပညာ၏ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာကိုပြောသည်အကောင့်တစ်ခုအတွက်. ဒါဟာထွက်လှည့်ပုံကိုရှင်းလင်း; သွေးသွင်းဖြစ်ပျက်မရှိစံချိန်လည်းမရှိ.
Royal Society ၏ထောငျခါစနှစ်က, လန်ဒန်မြို့ရှိခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 1660, သွေးသွင်းထဲတွင်အစောဆုံးစမ်းသပ်ချက်အချို့ကိုမြင်တွေ့. ဘယ်အချိန်မှာရောဘတ် Boyle, လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့တည်ထောင်သူတစ်ဦး, သိပ္ပံနည်းကျစီမံကိန်းများကိုတစ်လိုချင်သောစာရင်းပြုစု, ထိပ် entry ကို "အသကျ၏အရှည်" ခဲ့. ဒါကအောင်မြင်စေခြင်းငှါ, သူမျှော်လင့်, အသစ်ကအတူဟောင်းနွမ်းသောအသွေးကိုအစားထိုးခြင်းဖြင့်.
သိပ္ပံတိုးတက်မှုများကိုမျှော်လင့်ချက်ထက်ပိုပြီးကြာ. အသွေးတော်အုပ်စုများသို့မဟုတ်ခဲအချက်များအဘယ်သူမျှမအသိပညာနှင့်အတူ, အစောပိုင်းသွင်းစမ်းသပ်ချက်သေစေခဲ့ကြ. မကွာခငျမှာ, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပိတ်ပင်ထားခဲ့သည်, ပြင်သစ်တွင်ပထမဦးဆုံးအ, ပြီးတော့အင်္ဂလန်. ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအတွက်ပိတ်ပင်မှုထောက်ခံ 1679, နှင့်သှငျးအားလုံးဒါပေမယ့်ရာစုနှစ်စဲ. ဆေးပညာတိုးတက်လာသည်၎င်း၏ပြန်လာခွင့်ပြုခဲ့သည့်အခါ, အလေးပေးဖျားနာကုသခဲ့သည်, အသက်ကြီးကူညီပေးနေမဟုတ်.
ဒါဟာဖြစ်ပါတယ် 400 Libavius ​​ငယ်ရွယ်အသွေးတော်အဟောင်းကလူနုပျိုနိုင်မယ်အဆိုပြုထားပြီးကတည်းကနှစ်ပေါင်း. ထိုအချိန်မှာ, စိတ်ကူးအစွန်းရောက်များနှင့်အန္တရာယ်ရှိခဲ့သည်. ခေတ်သစ်သိပ္ပံသွေးသွင်းလုံခြုံစေတော်မူပြီသော်လည်း, အသွေးသည်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်အရည်ဖြစ်နေဆဲ: ကထက်ပိုမို ferries 700 ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလောင်းတစ်ဝှမ်းပရိုတိန်းနှင့်အခြားတ္ထုများ; အများအပြားလူသိများကြသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာတွေလုပ်ပေးလျော့နည်းရှင်းပါတယ်. Wyss-Coray သူတို့တွင်အိုမင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို orchestrate ကြောင်းအချက်များဖြစ်ကြောင်းသံသယရှိ. သိပ္ပံပညာရှင်များသူတို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်လျှင်, အိုမင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းလင်းသောအလောင်းတော်ထားစေခြင်းငှါ. ဒါဟာနှေးကွေးနိုင်, သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းပင်ပြောင်းပြန်.
Wyss-Coray သည်သူ၏အသက် 20 အရွယ်တုန်းက နှင့်အသက် 30, သူကအိုမင်းအကြောင်းအများကြီးစောင့်ရှောက်မှုမ. "သင်ပြဿနာတွေတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာမရှိဥာဏ်ရှိသည်,"ဟုသူကမကြာသေးမီကပြောတယ်, မိမိအပျော့ဆွစ်ဇာလန်-ဂျာမန်ဝဲထဲမှာ. အဆိုပါစစ်ပြန်ရေးရာဆေးရုံတွင်သူ့ရုံးခန်းထဲမှာထိုင်ရင်း, ရောဂါပြီးပညာနှင့်ဇီဝဗေဒအပေါ်စာအုပ်တွေကဝိုင်း, Wyss-Coray Fashion unshaven ခဲ့သည်, ဆံပင်ရွှေရောင်ဆံပင်နှင့်မှောင်မိုက်လုပျဖို့မျက်မှန်အားဖြင့်ရှုမြင်သုံးသပ်ကြသွက်မျက်လုံးပြာတစ်သီးနှံနှင့်အတူ. "အခုဆိုရင်ကျွန်မဦးနှောက်ကိုနှေးကွေးမှစတင်သည်သိမြင်. ကျွန်မအဖြစ်အမြန်ဆိုပိုပြီးအမှုအရာကိုကျက်မှာမဟုတ်ဘူး, သို့မဟုတ်သတိရမျက်နှာများ. ငါမိနစ်အနည်းငယ်အဘို့အပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုတွေ့မြင်ရန်အသုံးပြုငါသည်လည်းသူတို့၏မျက်နှာမှတ်မိချင်ပါတယ်. ငါသည်သူမအောက်မေ့ချင်ပါတယ်ဘယ်လိုနားလည်နိုင်ဘူး. ယခုမှာကငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်. ဒါဟာငါ့ကိုထဲကကင်လုပ်ခိုင်း annoys ။ "
Wyss-Coray များအတွက်, အိုမင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေး bugbear ထက်အများကြီးပိုဖြစ်လာသည်. တွင် 2014, အဆိုပါဂုဏ်သတင်းကိုအမေရိကန်ဂျာနယ်, သိပ္ပံ, ယခုနှစ်ယင်း၏ထိုးဖောက်၏နုပျိုသောအသွေးကိုတဦးတည်းအပေါ်သူ၏အလုပ်အမည်ရှိ. သူဟာပုံမှန်ညီလာခံနှင့်ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်ကြီးမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပေးဖို့ဖိတ်ကြား; ဇန်နဝါရီလအတွင်း, သူကဒါးဗို့အတွက်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်မှာပြောသော. "ငါသည်ပေးနီးပါးတိုင်းဟောပြောချက်ထဲမှာ, ကလူ Vampire အကြောင်းကိုမှတ်ချက်များသို့မဟုတ်ပြက်လုံးပါစေ။ "သူကနောက်ကျောကသူ့ကုလားထိုင်အတွက်ကျဆင်းခဲ့ခြင်းနှင့် ခံရ. မြည်းတမ်း. နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုလည်းဖွင့်သီးနှံကို: "ငါသည်ငါ့ကိုကလူကိုတောင်းခဲ့ကြ, '' သင်ကနုပျိုသောအသွေးကိုယူနေ?'' "သူကသူမဟုတျကွောငျးအကြှနျုပျကိုစိတ်ချပါ, ထိတ်လန့်၌မိမိမျက်နှာဖွင့်လွဲချော်သွားတာ, ဒါပေမယ့်သူတို့ကမမေးအဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူမယ့်; သူသည်မိမိထက်အများကြီးအသက်ငယ်ကိုကြည့်ရှု 50 နှစ်ပေါင်း.
တိုနီ Wyss-Coray စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်အာရုံကြောတစ်ဦးပါမောက္ခဖြစ်ပါသည် ဓါတ်ပုံ: တိုနီ Wyss-Coray
Wyss-Coray တက္ကသိုလ်သွားသူ၏မိသားစုအတွက်ပထမဦးဆုံးခဲ့. အစမှ, သူကအမေရိကန်အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှာမိမိမြင်ကွင်းများကိုသတ်မှတ်. တွင် 1993, သူက, La Jolla အတွက်ကောင်းစွာမှတ်ယူ Scripps Research Institute မှတစ်ဦးကိုပါရဂူသူချင်းအဖြစ်စတင်, ကယ်လီဖိုးနီးယား, HIV ပိုး-related စိတ်ဖောက်ပြန်လေ့လာနေ. အဆိုပါအလုပျအယ်လ်ဇိုင်းမားရဲ့သုတေသနမှဦးဆောင်, ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကရောဂါအတွက်အခန်းကဏ္ဍကိုဘယ်လိုအာရုံစိုက်. တွင် 2002, သူကစတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ဆေးကျောင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး, ဘယ်မှာသူတစ်ဦးဒြေအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်နေဆဲ.
မျိုးရိုးဗီဇရောဂါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့အယ်လ်ဇိုင်းမားကိုသုံးကြွက်အပေါ် Wyss-Coray ရဲ့သုတေသနများစွာ. လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်၏ဤမျိုးကိုအဓိကန့်အသတ်ရှိပါတယ်. အယ်လ်ဇိုင်းမားကြွက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိကျတဲ့ဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေ၏မိသားစုများအတွက်အလုပ်လုပ်သောရောဂါ၏ပုံစံများကိုတု, ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအယ်လ်ဇိုင်းမားများ၏ကြိုကြားကြိုကြားပုံစံများ၏ဇစ်မြစ်အကြောင်းအများကြီးမပြောနိုင်, အဘို့အကောင့်ရာ 99% လူ့ဖြစ်ပွားမှု. "လူတွေကအမြဲဟာသ: သင်တစ်ဦး mouse ကိုအနေနှင့်သင်အယ်လ်ဇိုင်းမားရှိပါက, အကြှနျုပျတို့သညျကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်, ပြဿနာမရှိပါဘူး,"Wyss-Coray ပြောတယ်. လူသားတွေကို, သို့သော်, ဘာမျှမယခုအထိအလုပ်လုပ်ခဲ့ထားပါတယ်.
မိမိအစမ်းသပ်ချက်များကန့်သတ်မှုကိုမကျေနပ်သောကြောင့်, Wyss-Coray ရောဂါပထမဦးဆုံးလူသားထဘယ်လောက်နားလည်ရန်ပိုကောင်းနည်းလမ်းတွေကိုမြော်လင့်. ဦးနှောက် Scan ဖတ်ခြင်းနှင့်သိမြင်မှုစမ်းသပ်မှုထွက်ခဲ့ကြသည် - မမော်လီကျူးအဆင့်မှာရောဂါအကြောင်းကိုဘာမှထုတ်ဖော်ပြသ. မသေသောသူတို့သည်ဦးနှောက်လေ့လာဖို့သဘောမျိုးလုပ်လိမ့်မယ်, သိပ္ပံပညာရှင်များအစဉ်အလာပြုသမျှအတိုင်း: အယ်လ်ဇိုင်းမားဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသောသိမ်မွေ့အာရုံကြောအပြောင်းအလဲများကိုလူနာကုသပေးလျက်ရှိသည်နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုဆယ်စုနှစ်မတိုင်မီရွေ့လျားမှုအတွက်သတ်မှတ်ထားကြသည်, အဟောင်းကိုဦးနှောက်ကိုဆိုလိုသောပုပ်တယ်ဘယ်လောက်ဆိုးသငျသညျကိုပြောသည်, ဒါပေမယ့်မပုပ်စတင်ခဲ့တယ်ဘယ်လောက်.
Wyss-Coray အသွေးအဖြေကိုကိုင်မယ်လျှင်အံ့ဩ. လူ့သွေးခရီးသွားမှတ်တမ်း 96,000 အဆိုပါသွေးလွှတ်ကြောတလျှောက်ကီလိုမီတာ, အဆိုပါသွေးလည်ပတ်မှုစနစ်၏သွေးပြန်ကြောများနှင့်သွေးကြောမျှင်ကလေးများ၏. ဒါဟာတိုင်းကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုမှတဆင့် circulates. ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဝှမ်းထုတ်လွှင့်အဖြစ်အသွေးအားသတင်းအချက်အလက်များကောက်ယူလျှင်အဘယ်အရာကို? ယင်း၏မော်လီကျူးမိတ်ကပ်ဦးနှောက်၏ပြည်နယ်ရောင်ပြန်ဟပ်ပါလျှင်အဘယျသို့, ဒါကြောင့်အသက်နှင့်ရောဂါနှင့်အတူပြောင်းလဲသွားတယ်အဖြစ်?
သူကစိတ်ကူးစမ်းသပ်ဖို့နှစ်ဒါဇင်သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကစုဝေး. သူတို့ကထက် ပို. အနေဖြင့်အသှေးကိုပလာစမာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ 200 အယ်လ်ဇိုင်းမားဝေဒနာရှင်, ကျန်းမာသောလူထံမှထိုအတူ profile များကိုနှိုင်းယှဉ်လျှင်. အဆိုပါတွေ့ရှိချက်, ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ 2007, ကမ္ဘာတဝှမ်းခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်လုပ်. ပလာစမာထဲမှာအချို့သောပရိုတိန်း၏အဆင့်ဆင့်တိုင်းတာအားဖြင့်, Wyss-Coray ရဲ့အဖွဲ့က၎င်း၏သေဆုံးသူယူစတင်ခဲ့ပြီးမတိုင်မီသူတို့အယ်လ်ဇိုင်းမားနှစ်ပေါင်းရှာဖွေရေးမှာတစ်ခုတိကျလမ်းကိုတွေ့ဖူးယုံကြည်သည်. Wyss-Coray Satoris ကို set up, ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ, သုတေသနစီးပွားဖြစ်ဖို့.
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကောင်းသောခဲ့သည်. စမ်းသပ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ Wyss-Coray ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်စိတ်မချရခဲ့ပြသ. ဒီအလုပျ၏သင်တန်း, သို့သော်, သူစိတ်ဝင်စားဖွယ်တစ်ခုခုတလွှားရောက်. သူကျန်းမာတဲ့လူတွေအတွက်သတိပြုမိ, သွေးထဲတွင်အခြို့သောပရိုတိန်း၏အဆင့်ဆင့်အသက်အရွယ်နှင့်အတူကျဆင်း. အားဖြင့် 20 အသက်အနှစ်, အများဆုံးပြီးသား steeply ကျဆင်းသွားခဲ့. ဤအတောအတွင်း, သည်အခြားပရိုတိန်း၏အဆင့်ဆင့်ကိုတက်အပူတပြင်း. တချို့ကအသက်ကြီးနှစ်ဆသို့မဟုတ်သုံးဆ. အဘယ်အရာကိုပြောင်းလဲမှုများကိုအဓိပ်ပာယျ, အဘယ်သူမျှမသိတယ်.
Wyss-Coray ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းကနေတစ်ဦးကကြမ်းပြင်အထိ သောမတ်စ် Rando ၏ရုံးဖြစ်ပါတယ်, ၏တစ်ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောပါရဂူနှင့်လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး အသက်ရှည်အပေါ်စတန်းဖို့ဒ်ရေးစင်တာ. မိမိအစားပွဲပေါ်မှာတွင်ဓာတုဗေဒဓာတ်ခွဲခန်းဖန်ထည်နှင့်နယူးယောက်မြို့ Giants ၏သေးသေးလေးရုပ်များစွာ၏သေးငယ်တဲ့ display ကိုထိုင်. ဒါဟာအတွက် Wyss-Coray ငှားရမ်းထားတဲ့သူ Rando ခဲ့သည် 2002. "တိုနီမယုံနိုင်လောက်အောင်တီထွင်ဖန်တီးမှုဖြစ်ပါသည်,"Rando ပြောတယ်. "သူကတပြင်လုံးကိုသက်ရှိများ၏အခြေအနေတွင်မှ neuroscience အကြောင်းကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်, အဖြစ်ကဦးနှောက်၏ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းရူပါရုံကိုသူတစ်စုံတစ်ဦးကိုဆန့်ကျင်။ "
တွင် 2005, Rando Wyss-Coray ရဲ့အလုပ်အတူနီးကပ်စွာလိမ်ယှက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့အရေးကြီးသောစမ်းသပ်ချက်တစ်ခုစီးရီးကြီးကြပ်. Rando ပင်မဆဲလ်အပေါ်ဗဟိုပြုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ချင်ခဲ့တယ်မေးခွန်း. ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တစ်ရှူးကျန်းမာဆက်လက်ဆဲလ်တွေရပ်တနှင့်ကောင်းမွန်သောအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်, ဒါပေမယ့်အဟောင်းတွေကလူအတွက်, ဆဲလ်တွေသူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်နေကြရပ်တန့်ရပ်တ - အနာသိပ်နှေးကွေးအသက်အရွယ်အဖြစ်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေအဘယ်ကြောင့်ဤ. သူတို့မရှိတော့လက်ျာအချက်ပြမှုများတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Rando ပင်မဆဲလ်အဟောင်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ပျက်ကွက်ခြင်းရှိမရှိသိချင်. ငယ်ရွယ်သွေးထဲမှာတစ်ခုခုပြန်ပေါ်နောက်တဖန်သူတို့ကိုလှည့်လျှင်အဘယ်အရာကို? ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သူသက်ကြီးရွယ်အိုသားငယ်များအဖြစ်အစာရှောင်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနေို.
Rando ရဲ့စမ်းသပ်ချက်ကြွက်တွေဟာခြမ်းတလျှောက်ဖြတ်အတူတကွချုပ်ခဲ့ကြသည့်အတွက်တစ်ဦးမငြိမ်ပေမယ့်ထူးခြားတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပါဝင်, အနာ-on-ဒဏ်ရာ. ဒီအလုပျထုံးလုပျနညျး, 19 ရာစုပြင်သစ် physiologist ရှင်ပေါလု Bert အားဖြင့်ရှေ့ဆောင်, parabiosis အဖြစ်လူသိများသည်. conjoined ကြွက်အပေါ် Bert ရဲ့အလုပ်ကြောင့်သရုပ်ပြ, သူတို့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေအနာကိုငြိမ်းစေခဲ့တခါ, တိရစ္ဆာန်တစ်ခုတည်းတီထွင်, shared သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်က.
အချိန်ကြာမြင့်စွာ, parabiosis ပါဝင်သောစမ်းသပ်ချက်စက်ဆုတ်ဘွယ်ဖြစ်သောခဲ့ကြသည်. တွင် 1956, Clive McCay, Wyss-Coray မှသုတေသနတစ်ခုကအလားတူလိုင်းလိုက်စားခဲ့သူကော်နဲလ်တက္ကသိုလ်မှအမေရိကန်လူမျိုး gerontologist, ဆေးပညာ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏သတင်းလွှာများတွင်ကြွက်များ conjoin မှသူ၏ကိုယ်ပိုင်ကြိုးစားမှုဖော်ပြထား. "နှစ်ခုကြွက်အချင်းချင်းညှိကြသည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်,"ဟုသူကရေးသားခဲ့သည်, "ဒါကြောင့်ပျက်စီးသည်အထိတစ်ဦးသည်အခြား၏ဦးခေါင်းကိုဝါးလိမ့်မည်။ " ဖှယျကဖြစ်သော်လည်း, McCay ရဲ့အလုပ်ငယ်ရွယ်အသွေးတော် rejuvenation ဂုဏ်သတ္တိများရှိအံ့သောငှါအရိပ်အမြွက်ပြောကြား.
သည်အခြားသိပ္ပံပညာရှင်များ McCay ရဲ့စမ်းသပ်ချက်ကိုတက် ယူ. အလားတူအားတက်စရာရလဒ်များကိုတယ်သော်လည်း, အလုပ်ထိထိရောက်ရောက် 1970 ခုနှစ်တွင်စွန့်ပစ်ခံခဲ့ရ. ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များစေဘယ်အရာကိုမသိမမှတ်ဘဲ, သုတေသီများသည်အခြားစီမံကိန်းများအပေါ်ပြောင်းရွှေ့. parabiosis စတန်းဖို့ဒ်မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည်တဲ့အခါမှသာသိပ္ပံပညာရှင်များ anti-အိုမင်းသက်ရောက်မှုများအသိပါစေရန်စတင်ခဲ့ပါ.
Parabiosis ယနေ့ကွဲပြားခြားနားသည်: ကျင့်ဝတ်ကော်မတီများတင်းကျပ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုတိုးတက်လျက်ရှိသည်. အဆိုပါတိရစ္ဆာန်များမျိုးဗီဇလိုက်ဖက်နေကြတယ်, ဒါကြောင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားငြင်းပယ်ခံရ၏အဘယ်သူမျှမစွန့်စားမှုလည်းမရှိ. သူတို့စစ်ဆင်ရေးမှပြန်လည်ကောင်းမွန်ရှိသည်ဟုပြီးတာနဲ့, တွဲတိရိစ္ဆာန်များပုံမှန်အားဖြင့်အစာစားရန်နှင့်အတူတူအသိုက်လုပ်လေ့. ဒါပေမယ့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနေဆဲစိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည် - ကပျော်ရွှင်တိရစ္ဆာန်ခေါ်ဆိုရန်လမ်းပိုင်းပါလိမ့်မယ်.
Rando ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာသိပ္ပံပညာရှင်တွေကငါးပတ်အဟောင်းနှင့်ငယ်ရွယ်ကြွက်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးသူတို့ကြွက်သားတစ်သျှူးအတွက်နည်းနည်းမျက်ရည်ပြုပြင်ကြပုံကိုကောင်းစွာကြည့်ရှု. ထိုလုလင်သည်အသှေးကိုအလျင်အမြန်၎င်းတို့၏ပျက်စီးသွားသောကြွက်သား regenerated သောအသက်ကြီးကြွက်များတွင်ပင်စည်ဆဲလ်များကို activated. ထိုလုလင်သည်ကြွက်, သို့သော်, အဟောင်းကိုသွေးသူတို့ရဲ့ထိတွေ့မှုများအတွက်ပိုမိုဆိုးရွားအခြေအနေကော. ၎င်းတို့၏ပင်စည်ဆဲလ်များကိုနှေးကွေးဖြစ်လာခဲ့သည်, နှင့်၎င်းတို့၏တစ်ရှူးကိုပိုမိုနှေးကွေးစွာအနာကိုငြိမ်းစေ. Rando လည်းအခြားအကျိုးသက်ရောက်၏သဲလွန်စကိုမြင်လျှင်, သူထုတ်ဝေရန်အချိန်မရောက်မှီပေမယ့်ပိုပြီးသက်သေအထောက်အထားလိုအပ်: အဟောင်းကိုကြွက်သစ်ကိုဦးနှောက်ဆဲလ်တွေကြီးထွားဖို့စတင်ခဲ့.
ရလဒ်ပူးပေါင်း Wyss-Coray နှင့် Rando ဦးဆောင်. ပရိုတိန်း Wyss-Coray ၏မျိုးဇီဝဖြစ်စဉ်များအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့လူသိများခဲ့ကြသည်သွေးထဲမှာတက်နှင့်အကျကိုတှေ့မွငျခဲ့. သူတို့ Rando ကြွက်သားများတွင်မြင်ဘူးပြောင်းလဲမှုများမောင်းနှင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်အရာကို? သူတို့အလားတူဦးနှောက်အားကောင်းလာစေပြီးစေခြင်းငှါ,? အဲဒီအစားအသက်မျှသာလက်မှတ်ပေါင်းဖြစ်ခြင်းထက်, ယင်းပရိုတိန်းအိုမင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကိုယ်တိုင်ဓါတုဗေဒတွေကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ,.
ရှောလုသည် Villeda ငယ်ရွယ်အသွေးပွနျလညျထူထောငျဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်အစောပိုင်းသုတေသနပြုထွက်သယ်ဆောင်. ဓါတ်ပုံ: ရှောလုသည် Villeda
Wyss-Coray စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရန်သူ၏ပါရဂူဘွဲ့ကျောင်းသားရှောလုသည် Villeda ဟုမေး. Villeda Los Angeles မြို့၏ဆင်ခြေဖုံးတွင် Pasadena မှာကြီးပြင်း. သူ့မိဘ 1970 ခုနှစ်တွင်ဂွါတီမာလာထံမှတရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းလာခဲ့ကြောင်း, နှင့်စက်ရုံများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အယူ, သို့မဟုတ်တံခါးစောင့်အဖြစ်. ရှောလုသည်ကောင်လေးတစ်ယောက်အခါသူတို့ကဥပဒေရေးရာနေထိုင်သူများဖြစ်လာခဲ့သည်. သူက LA ကအတွက်ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှကောလိပ်မှသွားသောအခါ Villeda သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်ခြင်းအပေါ်စီစဉ်ထားဘူး. ဒါပေမယ့်သူကဇီဝြဖစ်စဉ်အတန်းခံစား: "ကျွန်မချက်ချင်းသုတေသနနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျဆင်း,"ဟုသူကပြောတယ်. "သင်လုံးဝအသစ်သောအရာတစ်ခုခုအားစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်နှင့်အသငျသညျအမှုအရာမှထွက်တွက်ဆရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်ချက်အတူတက်လာနိုင်ခြင်းကြောင်းကိုစိတ်ကူးအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ " ဟုသူကသူနေတဲ့တက္ကသိုလ်သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်ချင်သည်သူ၏မိဘများပြောပြတဲ့အခါ, သူတို့ကယ့်ကိုသူကဆိုလိုမသိခဲ့ပါ. "ကျွန်မနေတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တူအဘယ်အရာကိုသူတို့ကိုပြသနိုင်ဖို့ငါ့အဘွဲ့ကြိုဓာတ်ခွဲခန်းမှသူတို့ကိုယူ,"ဟုသူကဆိုသည်. "ငါတကယ်ကသူတို့ကိုနားလည်ကူညီပေးခဲ့ကွောငျးထင်ပါတယ်။ "
Villeda သြဂုတ်လအတွင်းဓာတ်ခွဲခန်းအစည်းအဝေးတွင် Wyss-Coray မှ conjoined ကြွက်အပေါ်သူ၏အလုပ်တင်ပြပြီးနောက် 2008, သူကအဟောင်းနှင့်ငယ်ရွယ်သွေးထဲမှာပရိုတိန်းကိုကြည့်ဖို့သွား. သူကအဟောင်းကြွက်တွေ့ရှိခဲ့, အဟောင်းသောလူသားမြားကဲ့သို့အ, သူတို့ရဲ့သွေးထဲမှာ CCL11 ဟုခေါ်သောပရိုတိန်းဓာတ်၏မြင့်မားခဲ့. သငျသညျငယ်ရွယ်ကြွက်သို့ CCL11 ထိုးသွင်းခဲ့လျှင်, သူတို့ရဲ့လေ့လာသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ငြင်းဆန်. အဆိုပါပရိုတိန်း neuron အသစ်တွေ၏တိုးတက်မှုနှောင့်နှေး. ထိုလုလင်သည်ကြွက်တစ်ဦးရေဝင်္တစ်ဦးက hidden ပလက်ဖောင်း၏တည်နေရာမှတ်မိဖို့ရုန်းကန်, သူတို့သေးငယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မနှစ်မြို့ဖွယ်လျှပ်စစ်ရှော့ခ်လက်ခံရရှိခဲ့သည်နေရာအသိအမှတ်ပြုရန်ကြာကြာယူ. Villeda အတွက်မှတ်တိုင်သုတေသနထုတ်ဝေ 2011.
သို့သော်လေ့လာမှုကအဓိကဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်ပျက်ကွက်: ငယ်ရွယ်သွေးထဲမှာပရိုတင်းအဟောင်းကိုတိရိစ္ဆာန်များကိုဆုံးရှုံးသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည် restore နိုင်? ဒီအဘယ်သူမျှမနားမှာစမ်းသပ်လွယ်ကူသောဆိုလိုတယ်. တစ်ဦးက mouse ကိုရဲ့တစ်သိန်းတစ်ဦးရေဝင်္အတွက်ဆန်းစစ်နိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်နှစ်ခုကြွက်အတူတကွချုပ်? ဒါဟာအခြားဦးဆောင်ခဲ့ပြီးဘယ်လောက်တဦးတည်းကိုသိရန်မဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်. Wyss-Coray ယုံကြည်ထက် conjoined ကြွက်နှင့်အတူစမ်းသပ်, တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာငယ်ရွယ်ကြွက်တွေကနေအသွေးကို ယူ. ဖို့ဖြစ်တယ်, ထိုအသွေးဆဲလ်တွေထွက်အဝတ်တန်ဆာကိုချွတ်, နှင့်အဟောင်းတွေသို့ပလာစမာထိုးသွင်း. ဤ, လွန်း, ခက်ခဲ. အကြောင်းကိုတစ်ခုမှာ mouse ကိုအထွက်နှုန်း 200 ပလာစမာ၏ microlitres, လူအပေါင်းတို့သည်ပရိုတိန်းပါဝင်သောသောအဝါရောင်အရည်. အခြား mouse ကိုသို့နှစ်ခုကိုထိုးဘို့လောက်ပေ၏. လိုအပ်သည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအဘို့ 10 ထိုးသို့ 10 အဟောင်းကိုကြွက်, သင့်ထံမှအသှေးကိုအိပ်ထဲသို့ထည့်နေကြသည်ရန်လိုအပ်ပါတယ် 50 ငယ်ရွယ်ကြွက်.
Villeda စမ်းသပ်မှုလုပ်ဖို့တွန့်ဆုတ်ခဲ့. သူကအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာမထင်ခဲ့ဘူး. သို့သော်သူသည်ဦးနှောက်တစ်သျှူးတွေရဲ့ချပ်ပေါ်မှာလျှပ်စစ်တိုင်းတာဖျော်ဖြေတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲနှင့်လူငယ်သွေးထိတွေ့မှုဟောင်းကိုကြွက်များတွင်အားနည်းခဲ့ကြောင်းအာရုံခံအကြားဆက်သွယ်မှုကိုခိုင်ခံ့စေ၏တွေ့ရှိခဲ့. သူကသွေးရည်ကြည်ဆေးထိုးနှင့်အတူရှေ့ဆက်သွား၏. တစ်ခုချင်းစီကို mouse ကိုအဘို့အသီးအသုံးရက်တဦးတည်းထိုးခဲ့ 24 လက်ထက်. အဆိုပါပလာစမာသုံးလအရွယ်ကြွက်မှ လာ., ၎င်းတို့၏အသက် 20 အရွယ်လူသားတွေ၏ညီမျှသော, 18 လအရွယ်ကြွက်သို့သွားလေ၏, သူတို့ရဲ့ 60 ခုနှစ်လူသားတစ်ဦး၏ညီမျှသော.
ရလဒ်သိသိသာသာခဲ့ကြသည်. ငယ်ရွယ်ပလာစမာ jabs ပေးထားဟောငျးကြွက်ရေဝင်္စမ်းသပ် aced, လျင်မြန်စွာသူတို့အစောပိုင်းကလျှပ်စစ်ရှော့ခ်လက်ခံရရှိခဲ့သည်ရှိရာလှောင်အိမ်ကိုအောကျမေ့. သူတို့ကကြွက်ဝက်သူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့တူဖျော်ဖြေ. "ဒါကအချိန်, ကျွန်မတိုနီ data တွေကိုတဦးတည်း-on-တဦးတည်းပြသ,"Villeda ပြောတယ်. "ငါသည်ထွက် freaking ခဲ့သည်. ငါကလည်း: '' တဖန်ငါကဒီကိုမြင်ရဖို့ရှိသည်။ ' "
လူတိုင်းမအထင်ကြီးလေးစားခဲ့သည်. သဘာဝတရားထဲမှာလေ့လာမှုပယ်ချအဆိုပါဂျာနယ် 2012; ယင်း၏သုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုရှေ့ဆက်ကြီးမားတဲ့လုံလောက်အောင်ခုန်မဟုတ်ခဲ့ခံစားခဲ့ရ. ဒီတော့ Wyss-Coray နှင့် Villeda နှမထုတ်ဝေဖို့တလျှောက်ကစလှေတျတျော, nature Medicine. အဲဒီမှာအယ်ဒီတာများဟောင်းကြွက်ကကူညီပေးခဲ့အတိအကျဘယ်လိုငယ်ရွယ်အသွေးတော်သိလို. Villeda, ရုံ San Francisco မှာကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှသူ့ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ခွဲခန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သော, သူကအထဲကရှာတွေ့မယ်လို့ဆိုပါတယ်.
တစ်ဦးသွေးကြောထဲမှာသွေးရည်ကြည်ဆဲလ်တစ်ဏုအမြင်. ဓါတ်ပုံ: Alamy
Villeda ဗီဇဟောင်းကြွက်များတွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေသောလမ်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပုံကိုနုပျိုသောအသွေးကိုကြည့်ရှု. သူကအာရုံကြောဆက်သွယ်မှုကိုခိုင်ခံ့စေခြင်းနှင့်အားနည်းကူညီဗီဇအကြားတစ်ဦးကာလတုန်းကမရခဲ့ဘူးခြားနားချက်ကိုသတိပြုမိ, သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်များအတွက်အလွန်အရေးပါနေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို. ပုံမှန်အိုမင်းအတွက်, ဒီ "Synaptic plasticity" ကိုထိန်းချုပ်သောမျိုးဗီဇလျော့နည်းတက်ကြွဖြစ်လာ. Young ကပလာစမာ jabs ပြန်ဖွင့်သည့်မျိုးဗီဇလှုပ်ရှားမှုအပူတပြင်း.
ထိခိုက်မျိုးဗီဇ၏ပုံစံကနေ, Villeda ဦးနှောက်ထဲမှာမာစတာထိန်းညှိဖို့ယန္တရားကိုပြန်လည်ခြေရာကောက်, CREB အဖြစ်လူသိများနေတဲ့ပရိုတိန်း, အရာတခါမှာအများအပြားမျိုးဗီဇအပေါ်လှည့်ကျတဲ့ switch သည်နှင့်တူပြုမူ, နှင့်ကလေးမွေးဖွားထံမှ memory နဲ့သင်ယူမှုအတွက်နျဆာပဖြစ်ပါသည်. ငယ်ရွယ်ပလာစမာ CREB အားဖြင့်ပြုပြင်ခဲ့သည်ကိုအတည်ပြုရန်, Villeda ရဲ့ပါရဂူဘွဲ့ကျောင်းသား Kristopher Plambeck ချွတ်မာစတာထိန်းညှိလှည့်မယ့်ဗိုင်းရပ်စ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ. သူတို့ဟောင်းကြွက်ထဲသို့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးထိုးသွင်းလိုက်တဲ့အခါ, ငယ်ရွယ်ပလာစမာကသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်အပေါ်တစ်ဦးအများကြီးလျှော့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့. အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်များပိုကောင်းဖျော်ဖြေ, ဒါပေမယ့်သာအနည်းငယ်. ဒါဟာငယ်ရွယ်ပလာစမာ CREB မှတဆင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကွောငျးဖျောပွခဲ့, သော်လည်းမရသီးသန့်.
အဆိုပါလေ့လာမှုမှာသဘာဝဆေးပညာအတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် 2014. ချက်ချင်း, Wyss-Coray ရဲ့စာပုံးမှရေမြုပ်အီးမေးလ်များ. အယ်လ်ဇိုင်းမားဝေဒနာရှင်ငယ်ရွယ်သောအသွေးတာဟာလိုချင်. ဒါကြောင့်မြောက်မြားစွာအသက်ဘီလျံနာလုပ်ခဲ့တယ်. တစ်, သူဘက်မှာရေးထိုးသူ၏နာမနှင့်အတူတစ်ဂျက်အတွက်တစ်ဝှမ်းပျံ, ယခုနှစ်အပြီးပါတီတစ်ခုအော်စကာမှ Wyss-Coray ကိုဖိတ်ကြား. (သူကမသွားခဲ့ပါဘူး။) နောက်ထပ်သတင်းထောက်တစ်ဦးထက်ပိုစိတ်ပျက်စရာကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အတူရေးသားခဲ့သည်: သူသိပ္ပံပညာရှင်များလိုအပ်သမျှအသက်ကလေးတွေထဲကနေအသှေးကိုပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်. Wyss-Coray မိန်းမောတွေဝေခဲ့. "ဒါက creepy ခဲ့သည်,"ဟုသူကဆိုသည်.
Wyss-Coray နှင့် Villeda ဒီဒေသမှာခရီးအောင်တစ်ခုတည်းသောသိပ္ပံပညာရှင်များမဟုတ်ကြ. Rando ရဲ့နောက်ကွယ်ကအသင်းနှစျယောကျအဖွဲ့ဝင်များ 2005 ပင်စည်ဆဲလ်အပေါ်စက္ကူကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်, ဘာကလေ, သူတို့က oxytocin ကိုတွေ့ဘယ်မှာ, မကြာခဏချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ဟော်မုန်းကိုခေါ်, ဝိုင်အဟောင်းကိုကြွက်သားတစ်သျှူး. အခြား, မေီအာမခံ, ဟားဗတ်မှာအလုပ်လုပ်စတင်ခဲ့. သူမသည်ငယ်ရွယ် plasma ပေးသောအခါပြသ, အဟောင်းကိုကြွက်တွေဟာသူတို့ရဲ့လုံပြန်. ပြေးစက်ပေါ်တွင်, အဆိုပါကုသကြွက်ပျမ်းမျှတစ်နာရီအဘို့အထဲသို့ပြေး ဝင်., သာနဲ့နှိုင်းယှဉ် 35 တည်းကကုသမှုမရှိဘူးသူတို့အတှကျမိနစ်.
အာမခံတဦးတည်းအချက်ထွက်ကောက်ယူ, GDF11 အဖြစ်လူသိများ, ငယ်ရွယ်သွေးထဲမှာနေတဲ့ rejuvenation ပရိုတိန်းအဖြစ်. Villeda ရဲ့လတ်တလောစက္ကူခုနှစ်တွင်, ဇူလိုင်လအတွက်ထုတ်ဝေ 2015, သူကတစ်စက္ကန့်အချက်တစ်ချက်ကိုတွေ့, B2M, အဟောင်းကိုကြွက်များ၏သွေးထဲတွင်အများဆုံးကြွေတဲ့အရာ, ရှေးလူသားတွေအတွက်မအဖြစ်: ငယ်ရွယ်ကြွက်သို့ထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာ, B2M သူတို့ရဲ့မှတ်ဥာဏ်ချို့ယွင်း.
တဦးတည်းဦးတည်ချက်အတွက်လေ့လာမှုများအားလုံးအမှတ်. သွေးထဲတွင်တွေ့ရှိရဝတ္ထုများ၏ရာပေါင်းများစွာအနက်နုပျိုတစ်ရှူးစောင့်ရှောက်သောပရိုတိန်းများမှာ, သူတို့ကိုပိုပြီးအသက်စေပရိုတိန်း. Wyss-Coray တစ်ဦးအယူအဆရှိပါတယ်: ကျွန်တော်တို့ဟာမွေးဖွားလာသည့်အခါ, ငါတို့အသွေးကိုသွန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ရှူးကြီးထွားခြင်းနှင့်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေကိုပရိုတိန်းနှင့်အတူရှိနေသည်. လူကြီးအတွက်, ဒီပရိုတိန်း၏အဆင့်ဆင့်မှန်ထုပ်. သူတို့ကို secrete သောတစ်ရှူးသူတို့ဟောင်း get ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လျော့နည်းထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ထွက်ဝတ်ဆင်စေခြင်းငှါ,, ဒါမှမဟုတ်အဆင့်ဆင့်အနေနဲ့တက်ကြွစွာမျိုးရိုးဗီဇ program ကနှိမ်နင်းစေခြင်းငှါ. တစ်နည်းနည်းဖြင့်, ဤအလိုလားသူနုပျိုပရိုတိန်းကိုအသွေးထဲကနေကွယ်ပျောက်အဖြစ်, ဆိုးရွားဖို့ခန္ဓာကိုယ်က start န်းကျင်တစ်သျှူး. ခန္ဓာကိုယ်လိုလားသူရောင်ရမ်းပရိုတိန်းဖြန့်ချိခြင်းဖြင့်တုံ့ပြန်, သောအသွေး၌တည်ဆောက်, နာတာရှည်ရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဆဲလ်တွေဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့်အိုမင်း accelerates.
"ဒီတစ်ခုလုံးဝအသစ်သောလယ်ပြင်၌ဖွင့်လှစ်. ဒါဟာသက်ရှိများ၏အသက်အရွယ်ကိုပြောထားသည်, ဦးနှောက်နဲ့တူဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို, ကြောကျခဲ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏မဟုတ်ပါ. ဒါဟာပျော့ဖြစ်ပါသည်. သင်တဦးတည်းဦးတည်ရွှေ့သို့မဟုတ်အခြားနိုင်ပါတယ်,"Wyss-Coray ပြောပါတယ်. "ဒါဟာငယ်ရွယ်သက်ရှိတစ်ခုခုနုပျိုထိနျးသိမျးထားနိုငျကြောင်းနီးပါးဒဏ္ဍာရီင်, ထိုသို့ဖြစ်ကောင်းစစ်မှန်တဲ့ပါပဲ။ "
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဆိုပြုအဖြစ်, ငယ်ရွယ်အသွေးသွင်းခြင်း စိုးရိမ်မှုတွေအမျိုးမျိုးတို့ကိုတိုးပွါးလာ. ဒါဟာ macabre အနက်ရောင်စျေးကွက်၏ကိစ္စများကလည်းကဏ္ဍပေါ်ပေါက်, ဆယ်ကျော်သက်အမြင့်ဆုံးလေလံများအတွက်သွေးထွက်ဘယ်မှာ, နှင့်လူငယ်ကလေးများလမ်းများထံမှပျောက်ဆုံးသွားပါ. ထို့နောက်အတုပလာစမာရောင်းမရိုးသားတဲ့ကုန်သည်တွေရဲ့စိုးရိမ်ရေမှတ်လည်းမရှိ, လူ့ပြုတ်ရည်များအတွက်အန္တရာယ်မကင်းသို့မဟုတ်ပလာစမာ. အဆိုပါစိုးရိမ်မှုများအခြေအမြစ်မရှိမဟုတ်: ကျန်းမာရေးရာဇဝတ်ကောင်များနှင့် con အနုပညာရှင်တွေများအတွက်အကျိုးအမြတ်အများဆုံးကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါသည်.
Havocscope, အွန်လိုင်းမှဒေတာဘေ့စ, နောက်ဆုံးပေါ်မှောင်ခိုစျေးကွက်ကုန်စည်အားလုံးထုံးစံ၏စျေးနှုန်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုခြေရာခံ. ဘို့0သငျသညျဥရောပတိုက်တွင် AK-47 ဝယျနိုငျ. တစ်ဦးကကြံ့-ဦးချိုကိုဓားမြှောင်ကိုသင်ကုန်ကျမည် ,000. ယခင်စစ်စနိုက်ပါ၏အုပ်စုတစု၏န်ဆောင်မှုများ? ဒါကဖြစ်လိမ့်မည် 0,000. အဆိုပါစာရင်းကိုလည်းလူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများပါဝင်သည်, အများအားဖြင့်အဆုတ်, ကျောက်ကပ်နှင့်အသည်း. ယနေ့တွင်, ကျန်းမာရောင်းချသူနှင့် ပတ်သက်. မြျှောလငျ့နိုငျ ,000 သူတို့ရဲ့ကျောက်ကပ်များအတွက်. သဘောတူညီချက်ကိုင်တွယ်ခဲ့သူကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုပွဲစားတစ်ဦးကြီးမားကျယ်ပြအမြတ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်, ထိုသို့အပေါ်ရောင်းချနေ 0,000 တစ်ဦးအစားထိုးကုသမှုလိုအပ်နေပါသည်သူတစ်ဦးချမ်းသာကြွယ်ဝစိတ်ရှည်ဖို့.
အချို့နိုင်ငံများရှိ, အသွေးတော်ပလာစမာများအတွက်ဥပဒေရေးရာစျေးကွက်ပြီးသားလည်းမရှိ. 1990 ၏ BSE အကျပ်အတည်း၏ပါတီအားအတွက်, ပလာစမာအလှူငွေဗြိတိန်တွင်အသုံးပြုကြသည်မဟုတ်. သို့သော်အမေရိကန်တွင်, အလှူရှင်များဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်0တစ်လ (ပေါင်းသစ္စာရှိမှုအချက်များ) ပလာစမာအလှူငွေထဲကနေ. အဆိုပါလတ်ဆတ်တဲ့သွေးရည်ကြည်ကိုအသွေးထဲကခြားနားနေသည်, နှင့်သွေးနီဆဲလ်တွေသွေးကြောမှပြန်လာသော, ကြာရှည်ခံမယ့်ထိုင် 90 မိနစ်. အဆိုပါပလာစမာဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက်အသုံးပြုသည်, ခဲမမှန်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ခံအားချို့တဲ့ဆက်ဆံဖို့. စီးပွားရေးလုံးဝတရားဝင်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ငယ်ရွယ်ပလာစမာ Anti-အိုမင်းသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့သက်သေပြလိုလျှင်, တက် setting Backstreet အော်ပရေတာများ၏အန္တရာယ်ပျံဝဲပါလိမ့်မယ်. အလားအလာသူ့ကိုစိုးရိမ်မယ်ဆိုရင်ငါ Wyss-Coray မေးတဲ့အခါ, သူကအလေးအနက်ကြည့်ရှု. "လုံးဝ,"ဟုသူကဆိုသည်. "အစဉ်အမြဲ nutcases ဖြစ်ရှိသွားနေကြတယ်။ "
ငယ်ရွယ်အသွေးသွင်းဆယ်ကျော်သက်အမြင့်ဆုံးလေလံများအတွက်သွေးထွက်တဲ့ macabre အနက်ရောင်စျေးကွက်၏ကိစ္စများကလည်းကဏ္ဍပေါ်ပေါက်
ဤရွေ့ကားအဆိုးဆုံး-ကိစ္စတွင်အခြေအနေတွေရှိပါတယ်. အဆိုပါစတန်းဖို့ဒ်ရုံးတင်စစ်ဆေးရိုးရှင်းစွာအဟောင်းများကိုလူတွေကိုသို့ငယ်ရွယ် plasma ထိုးသွင်းနည်းနည်းသို့မဟုတ်လုံးဝမသက်ရောက်ရှိပါတယ်ကွောငျးတှေ့နိုငျသ. Wyss-Coray သူအဖြစ်အများကြီးသံသယရှိကြောင်းဝန်ခံ. သူသက်ကြီးရွယ်အို rejuvenating သဘာဝကပလာစမာထက်ပိုမိုအစွမ်းထက်ဘီယာအရက်ချက်ယူအံ့သောငှါယုံကြည်နေ. သူစိတ်တွင်တစ်ဦးစုစည်းရောစပ်ရှိပါတယ် 10 သို့မဟုတ် 20 ငယ်ရွယ်သှေးမှလိုလားသူနုပျိုအချက်များ, အဟောင်းကိုသွေးထဲတွင်တွေ့ရှိရအိုမင်းအချက်များများ၏သက်ရောက်မှုကြားကြောင်းပဋိနှင့်အတူရောထွေး.
ဇန်နဝါရီလထဲမှာ 2014, Wyss-Coray Alkahest ကို set up, ၎င်း၏မဲဆန္ဒနယ်အစိတ်အပိုင်းသို့ပလာစမာခွဲခြားရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းကုမ္ပဏီ, နှင့်အစွမ်းထက်သို့သူတို့ကိုငါပေါင်းစပ်, rejuvenation ကော့တေး. ဆီလီကွန်ချိုင့်၌, အချို့သုတေသီများနေဆဲအပေါ်သို့မျက်မှောင်ကြုတ်သောစီးပွားဖြစ်တစ်ခု alignment ကိုနှင့်သိပ္ပံနည်းကျ - သိပ္ပံပညာရှင်များမကြာခဏအစောပိုင်းအဆင့်သုတေသန၏နောက်ကျောအပေါ် start-up ကုမ္ပဏီများသည်ကိုစတင်ရန်. ဆာဂျီယို della Sala, Edinburgh တက္ကသိုလ်မှလူ့သိမြင်မှုမှ neuroscience ပါမောက္ခ, သိပ္ပံပြုမပြုမီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခမြှင့်နိုင်သည်ကိုသတိပေးလိုက်သည်. "သိပ္ပံပထမဦးဆုံးရောင်းပြီးတော့နားလည်သင့်တယ်,"ဟုသူကဆိုသည်. "ဒီနှစ်ခုမှာအချက်များပြောင်းပြန်ကြသောအခါကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသံသယဖြစ်သင့်ပါတယ်။ "
Wyss-Coray Karoly Nikolich နှင့်အတူ Alkahest ဖွဲ့စည်းခဲ့, စတန်းဖို့ဒ်မှာလုပ်ငန်းရှင်နှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်, အဘယ်သူသည် 1970 ခုနှစ်တွင်ဟန်ဂေရီကနေအမေရိကန်ကိုရွှေ့ပြောင်းလာ. ငါဖေဖော်ဝါရီလ Menlo Park ရှိသူ၏ရုံးမှာ Nikolich တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး. သူကပါးလွှာသောဆံပင်ရှိပါတယ်, အပြည့်အဝမီးခိုးရောင်နှုတ်ခမ်းမွေးများနှင့်ပုံပြင်များနှင့်ပြည့်စုံတစ်ဦးစိတ်ကို. နေရောင်-ယစ်မူးအိမ်ခေါင်မိုးကျန်ကြွင်းသောအရပ်ပေါ်မှာစားပွဲ၌ထိုင်လျက်, Nikolich, ငါ့ကိုတစ်ခု Alkahest စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်ပေးအပ်. အဆိုပါကုမ္ပဏီလိုဂိုအပြာရောင်မျက်ရည်စက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့်ရွှေ disc ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်အတွင်းပိုင်း.
Karoly Nikolich, Alkahest ၏တိုနီ Wyss-Coray နှင့်အတူပူးတွဲတည်ထောင်သူ, အဆိုပါနုပျိုသောအပလာစမာထဲမှာသော့ချက်ပရိုတိန်းကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အသက်အရွယ်လူ့တစ်ရှူး. ဓါတ်ပုံ: Karoly Nikolich
Nikolich အတွက် Wyss-Coray သိရန်တယ် 2005. သူကစတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်မှနှင့်နှစ်အတွင်းအာရုံကြောသိပ္ပံအင်စတီကျု၏အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၏အလုပ်အပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်, Nikolich Wyss-Coray ရဲ့တိုးတက်မှုအပေါ် tabs များထားရှိမည် - ထိုအယ်လ်ဇိုင်းမားရဲ့သွေးစမ်းသပ်မှုကနေငယ်ရွယ်အသွေး rejuvenation ဂုဏ်သတ္တိများမှ. ဒါပေမယ့်နွေဦးသည်အထိမဟုတ်ခဲ့ 2012 ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်အစီအစဉ်များထွက်ပေါ်လာကြောင်း. Nikolich ချန်ဒင်-hwa ၏မိသားစုသွားရောက်ဟောင်ကောင်ပျံသန်းပို့ဆောင်ခဲ့, လဲမှို့ချည်ခင်၏ဘုရင်အဖြစ်လူသိများနေတဲ့တရုတ်ဘီလျံနာ. သုံးနှစျအစောပိုငျးက, Chen ကကွယ်လွန်သွားခဲ့သော, အသက်ကြီး 89, အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့်အတူ. သူ့မြေးသူ၏အသက်တာ၏အဆုံးကိုဦးတည်ကြောင်း Nikolich ပြောသည်, Chen ကအနိုင်နိုင်သူ့ကိုယ်ပိုင်မိသားစုအသိအမှတ်ပြု. ထို့နောက်သူတစ်ဦးသက်ဆိုင်တဲ့အခွအေနေများအတွက်ပလာစမာသွေးသွင်းခဲ့, တစ်ဦးအံ့မခန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့သလိုပဲအရာ. မိမိကြံစည်ရှင်းလင်းခဲ့သည်. သူကရုတ်တရက် cogent ခဲ့သည်.
Nikolich Wyss-Coray ရဲ့သုတေသနနဲ့အိုမင်းဦးနှောက်ပြန်လည်အသက်သွင်းဆောင်ရွက်နေပြီကြောင့်ပလာစမာ-based ကုထုံးများအတွက်အလားအလာအကြောင်းကိုသူတို့အားကြားပြော. မကွာခငျမှာ, စကားဝိုင်းမှကုမ္ပဏီစတင်လှည့်. အဆိုပါမိသားစုတစ်နှစ်အကြာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ. ပိုက်ဆံ Alkahest ထူထောင်နှင့်လူငယ်ပလာစမာ၏ပထမဦးဆုံးလူ့ရုံးတင်စစ်ဆေးဖွင့်ဖို့အဆင်သင့်တယ်.
Alkahest ရဲ့အဆုံးစွန်ရည်မှန်းချက် - သော့ချက်နုပျိုသောအပလာစမာထဲမှာပရိုတိန်းသို့မဟုတ်အသက်အရွယ်လူ့တစ်ရှူးခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးတော့သူတို့ကိုအသုံးပြုတဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ် - ယူနိုင်ခဲ့ 10 သို့ 15 နှစ်ပေါင်း. မဝေးတော့တဲ့သက်တမ်းအတွက်, ကုမ္ပဏီ၏အခြားမဟာဗျူဟာရှိပါတယ်. ယခုနှစ်အစောပိုင်းက, စပိန်တို့၏အသွေးထုတ်ကုန်ကုမ္ပဏီတခု, Grifols, တစ်ဘို့ .5m ကတိပြု 45% Alkahest အတွက်ရှယ်ယာ. အခြား .5m နှင့်အတူ, ကုမ္ပဏီ Alkahest ရဲ့ပထမဆုံးထုတ်ကုန်အခွင့်အရေးအတွက်လဲလှယ်ပိုမိုသုတေသန bankroll ပါလိမ့်မယ်. လာမယ့်နှစ်နှစ်ကျော်, Alkahest လူ့ပလာစမာယူနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပရိုတိန်းကြွယ်ဝဖြစ်ကြောင်းပိုငျးသို့ခွဲပါလိမ့်မယ်. တစ်ခုချင်းစီကိုအစိတ်အပိုင်းပြီးတော့သူတို့ဦးနှောက် function ကိုမြှင့်တင်ရန်လျှင်ကြည့်ဖို့ကြွက်တွေမှာစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါလိမ့်မည်. မဆိုအလျင်အမြန်လူ့စမ်းသပ်မှုတွေသို့မိတ်ဆက်နှင့်ထုတ်ကုန်၏ပထမမျိုးဆက်သို့တီထွင်ပါလိမ့်မည်မ.
ပြီးတော့အဘယျသို့? ပလာစမာကုထုံး၏မျှော်လင့်ချက်အဘို့တစ်ခုမှာကြီးမားသောအတားအဆီးကန့်သတ်ထောက်ပံ့ရေးဖြစ်ပါသည်. မောက်လေ့လာမှုများကနေကြမ်းတမ်း extrapolation အတွက်, Nikolich ကမ္ဘာလုံးရဲ့တစျခုလုံးကိုပလာစမာထောက်ပံ့ရေးထက်ဝက်သာတစ်ဦးသန်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်၏အဘို့လုံလောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်း 15 သန်းအယ်လ်ဇိုင်းမားဝေဒနာရှင်. "ဒါကကုသမှုနှင့်အတူအဘယ်သူမရရှိသွားတဲ့သူကြီးတွေမေးခွန်းများကိုဆိုလိုတယ်,"ဟုသူကဆိုသည်.
အဆိုပါ Palo Alto စစ်ပြန်ရေးရာဆေးရုံကနေတစ်ဦးကတိုတောင်းသော drive ကို ဆေးပညာ၏စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ကျောင်းဖြစ်ပါသည်, အဆိုပါ Alkahest ရုံးတင်စစ်ဆေးပြေးသည်အဘယ်မှာရှိ. တရားခွင်၏တာဝန်ခံထိုမိန်းမသည်ရှာရုန် Sha ဖြစ်ပါသည်, အယ်လ်ဇိုင်းမားရှိသည်သောလူနာများနှင့်အတူသူမ၏အချိန်အများကြီးသုံးစွဲတဲ့သူအမူအကျင့်အာရုံကြောထဲမှာအထူးကု. ငါဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုသောအခါ,, Sha, မှောင်မိုက်ပခုံး-အရှည်ဆံပင်နဲ့ cheery အမျိုးသမီးတစ်ဦး, သူမ၏တတိယအထပ်ရုံးမှာအစည်းအဝေးတစ်ခုအဘို့အနှောင်းပိုင်းတွင်အပြေးခဲ့သည်. သို့သော်သူမအကြောင်းပြချက်ကောင်းဘို့အနှောင့်နှေးခဲ့သညျ: သူမသည်ရုံးတင်စစ်ဆေးအပေါ်စာရင်းသွင်းထားတဲ့အယ်လ်ဇိုင်းမားလူနာသို့ငယ်ရွယ်ပလာစမာ infusing ခဲ့ - တဟုန်တည်းပြေးမရနိုငျသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်း.
အဆိုပါ Alkahest ရုံးတင်စစ်ဆေးသေးငယ်သည်. Sha သာစာရင်းသွင်းနိုင်ပါတယ် 18 အသက်ကလူ 50 သို့ 90 အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအလယ်အလတ်မှအပျော့စားနှင့်အတူ. တစ်ခုချင်းစီကိုလေးပတ်ကြာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းတစ်ချိန်ကနုပျိုလူ့ပလာစမာသို့မဟုတ်ဆားတစ်ယူနစ်အားလက်ခံတွေ့ဆုံ. သူတို့ကလာမယ့်ရက်သတ္တခြောက်ပတ်ကိုချွတ်ပြီ, ထို့နောက်တာဟာလေးခုထက်ပိုရက်သတ္တပတ်များ. ပတ်ပတ်လည်ပလာစမာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ခဲ့သူများသည်ဆားနှင့်အပြန်အလှန် get. အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုမြင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်, ထို့ကြောင့်လူနာတွေကိုမ, မဟုတ်သလိုသူတို့ရဲ့စောင့်ရှောက်သူများ, မဟုတ် Sha သူ့ကိုယ်သူ, အဘယ်အရာကိုလက်ခံရရှိသူသိပါ. တရားခွင်တစ်လျှောက်လုံး, ဆရာဝန်များကသိမြင်မှုတိုးတက်မှုများအတွက်ကြည့်ရှုမည်. ကိုသာရုံးတင်စစ်ဆေးရဲ့အဆုံးမှာ, အဖြစ်မကြာမီအောက်တိုဘာလဒီနှစ်အဖြစ်, Sha တွေ့ရှိချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိမ့်မယ်.
ရှာရုန် Sha ဆေးပညာ၏စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ကျောင်းမှာသွန်းသောအသွေးပလာစမာရုံးတင်စစ်ဆေးတာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: ရှာရုန် Sha
Big မေးခွန်းများကိုရှေ့ဆက်အိပ်ရ. လူနာများ၏အဘယ်သူမျှမငယ်ရွယ်ပလာစမာနေအကြိုးခံစားရရင်တောင်, သုတေသနဝေးချောနေ. အဆိုပါစမ်းသပ်မှုများအတွက်ပလာစမာအောက်မှာအလှူရှင်များထံမှလာ 30, ထိုသို့အလုံအလောက်အစွမ်းထက်မကျမည်အကြောင်း. တရားခွင်ပေါ်လူနာပြီးသားစိတ်ဖောက်ပြန်ပြီ, နှင့်ဝေးလွန်းကယ်ဆယ်ရေးမှလွန်ပါစေခြင်းငှါ.
ယခုနှစ်အစောပိုင်းက, University College London မှဂျွန် Hardy, ဗြိတိန်မှာအများဆုံးကိုးကားအယ်လ်ဇိုင်းမားသုတေသီသောသူသည်, လန်ဒန်မြို့ရှိအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာ Wyss-Coray ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ဒေတာကိုမွငျလြှငျ. "ဒါဟာတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့အလုပ်င်,"ဟုသူကပြောတယ်. "ဒါဟာလူတိုင်းတက်ရောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ " မည်သို့ပင်ဆိုစေ, Hardy သတိထားဖြစ်ပါသည်; သူကငယ်ရွယ်ပလာစမာကြွက်တွေထက်ကလူအတွက်လျော့နည်းထိရောက်သောဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသံသယရှိ, လူတွေသိပ်ကြာကြာအသက်ရှင်သောကြောင့်, နှင့် ပို. မတူညီပတ်ဝန်းကျင်မှာ. ဒါပေမဲ့, ဟုသူကပြောသည်: "ငါသည်ဤနေဆဲပိုပြီးယေဘုယျအားဖြင့်အိုမင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်လမ်းကြောင်းဆီသို့ဦးတည်ကျွန်တော်တို့ကိုညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်မှန်းပေမည်။ "
လူနာငယ်ရွယ်ပလာစမာ၏တာဟာနှင့်အတူတိုးတက်စေလိုလျှင်, သိပ္ပံပညာရှင်များ ecstatic ဖွစျလိမျ့မညျ. ဒါပေမယ့်တွေ့ရှိချက်ပုံတူကူးယူခံရဖို့လိုအပျမညျ, ထွက်ရှိသောသည်အခြားဆေးရုံများမှာ, နှင့်ပိုပြီးလူနာအတွက်, သုတေသီများစည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်ရန်အတွက်. မည်သည့်အကျိုးခံစားခွင့်အချိန်စမ်းသပ်မှုရပ်နေလျှင်, အဆိုပါလေ့လာမှုများအပေါ်ရွှေ့မည်, ပလာစမာပေးရမှာအကောင်းဆုံးဆေးများနှင့်အသက်အရွယ်အထဲကမာရ်နတ်ရန်, ဘယ်လိုလူနာတွေကို '' ဦးနှောက်ကိုပြောင်းလဲ, နှင့်တိုးတက်မှုများမရှိတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မိသားစုအသိအမှတ်မပြုနိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦး၏အသက်တာမှတစ်ဦးကိုမှန်ကန်ခြားနားချက်စေခြင်းရှိမရှိ.
ထိုအခါဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိ. အိုမင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူ Toying ရလဒ်များကိုစေခြင်းငှါ,. Rando နှစ်ပေါင်းလူတွေကိုသို့လိုလားသူနုပျိုပရိုတိန်းချပေးသူတို့ကိုကင်ဆာပေးခြင်းတက်အဆုံးသတ်နိုင်မယ်စိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ပါသည်. Wyss-Coray ကစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ပါတယ်သဘောတူ, ဒါပေမယ့်ရေရှည်ကြီးထွားဟော်မုန်းကုထုံးလုံခြုံဖြစ်ပေါ်လာသောအထဲကထောက်ပြ. "ကျနော်တို့ကကိုယ့်ကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်စေမသေးမသိရပါဘူး,"ဟုသူကဆိုသည်.
Rando တိုတောင်းသောကာလအဘို့လိုလားသူနုပျိုပရိုတိန်းနှင့်အတူလူနာ infusing အကြောင်းပိုမိုမထားဘဲဖြစ်ပါသည်. ခွဲစိတ်ရှိခြင်းအနေနဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကသူတို့ကိုဆယ်ကျော်သက်များကဲ့သို့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေကူညီရန်တစ်ခုပြုတ်ရည်ရစေခြင်းငှါ,. "ဖွင့်ပါကအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုပါစို့. သငျသညျတစ်ရှူးပစ်မှတ်ထားနှင့်အထက်ကလူအတွက်ဒဏ်ရာအနာပျောက်စေသောအတိုးတက်ကောင်းမွန်နိုင်လျှင်, တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ချဉ်းကပ်ပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာ 90 နှစ်အရွယ်အငယ်အောင်အကြောင်းကိုမညျမဟုတျ, သို့မဟုတ်လူတွေအသက်ရှင်ရှိခြင်း 150. ဒါဟာကျန်းမာတဲ့လူနေမှုအကြောင်းကိုဖွင့်, ကြာကြာမပေးလူနေမှု,"ဟုသူကဆိုသည်.
ထဲမှာ 20 Wyss-Coray US မှာနေထိုင်ခဲ့တော်မူကြောင်းကိုအနှစ်, အိုမင်းရန်သူ၏သဘောထားကိုစိတ်မထံမှညှို့မှဝှေ့လိုက်ပါတယ်. အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦး mouse ကိုသုံးနှစ်နှင့်များအတွက်လူသားတစ်ဦးအဘို့အနထေိုငျပါဘူး 80? သူလည်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဆင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုကိုမြင်. စကားလုံးတစ်လုံးအဖြစ်လျင်မြန်စွာကြောင့်တစ်ချိန်ကပြုသကဲ့သို့လာရန်ပျက်ကွက်သောအခါသူစိတ်ပျက်ရရှိသွားတဲ့, ဒါပေမယ့်စိတ်ဖောက်ပြန်၏အစောပိုင်းဆိုင်းဘုတ်များကိုသတိပွုမိလူတို့အဘို့ဖြစ်ရမည်ဘယ်လောက်ဆိုးရွားသိတယ်: သူတို့၏စကားနှင့်အမှတ်တရများအဆိုပါမှောငျသို့ချက်ခြင်းချော်.
ထိုလုလင်သည်-အသွေးအားရုံးတင်စစ်ဆေးစာရင်းသွင်းလူနာများ၏စောင့်ရှောက်သူများလူနာလုပ်နေတာဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းမှတ်တမ်းတင်ဖို့ဂျာနယ်များစောင့်ရှောက်. ၎င်းတို့၏စာမျက်နှာများတွေထဲမှာမျှော်လင့်ချက်အရိပ်လက္ခဏာဖြစ်နိုင်သည်, ဖြစ်ကောင်းတစ်ခုပြုတ်ရည်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်းအတွက်, လူနာနည်းနည်းပိုကောင်းမ. "ဒါဟာတကယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုလြှငျ? ဒါကကြီးမားတဲ့လိမ့်မယ်. တိုင်းလူနာကလို,"Wyss-Coray ကပြောပါတယ်. သူကပြုံးပြီး. "ငါသည်ဖြစ်ကောင်းငါ့အကိုအီးမေးလ်ကို turn off နှင့်အခြားတစ်နေရာသို့သွားရန်ရှိသည်ချင်ပါတယ်။ "
•တွစ်တာပေါ်တွင် Long ကဖတ် Follow: @gdnlongread
26839	0 Ageing, အပိုဒ်, အင်္ဂါရပ်များ, မှ Ian နမူနာ, အဓိကအပိုင်း, သိပ္ပံ, အုပ်ထိန်းသူ, အဆိုပါရှည်လျားသောဖတ်
← Google Glass ကိုနောက်ကျောဖြစ်ပါတယ်! မှန်မှန် 'အဆေးလုံးကိုယူပြီးကင်ဆာရောဂါနှစ်မျိုးနှစ်ပုံစံများကိုကာကွယ်တားဆီးကူညီပေးသည်’ အသုံးပြုမှုပြီးနောက်ဆယ်စုနှစ်များစွာ →